Homeसमाचारएकै घरका जेठानी देउरानी एकै दिन हि’डे, श्रीमान घरमा नभएको बेला केटा बोलाएर पाटी गर्थे (भिडियो सहित)
March 4, 2021 admin समाचार 5599
बाँकेमा एक अनौ’ठो घ’टना भएको छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिका ९ मा एकै घरका देउरानी जेठानी हरा’एका थिए । देउरानीको केही वर्ष अघि विवाह भएको थियो भने जेठानीको केही महिना मात्र भएको थियो । जेठानी ख’गिसरा फेला परे’की छैनन् भने देउरानी एक होटलमा फे’ला परेको बताइएको छ । उनीसंग केही युवा समेत रहेको परिवारका सदस्य’ले बताएका छन् ।
संगीता बस्याल (देउरानी) हरा’एको दुई दिन पछि सम्प’र्कमा आएपछि खोजी गर्दै जाँदा फे’ला परेको अमाजुले बताएकी छन् । परिवारका सदस्यले घरका २ बुहारी ह’राएको भनेर सार्वजनिक गरेपछि देउरानी आफै सम्पर्कमा आएको परिवारका सदस्यको भनाई छ । तर अझै जेठानी भने सम्प’र्कमा आएकी छैनन् ।
श्रीमानहरु रोजगारीमा वाहिर रहेको बेलामा घरमा रहेका उनीहरुका श्रीमतीहरु एकाएक ह’राएका हुन् । उनीहरुका श्रीमानले कामवाट आउँछौं भनेपछि एकाएक दुई देउ’रानी जेठानी हरा’एका हुन् । आफुहरु घरमा आएपछि परिवारमा श्रीमतीहरुले अन्य युवा घरमा ल्याएर र’ क्सी खाँदै रमा’इलो गर्ने गरेको थाहा पाएको बताएका छन् । दुवै जनाले प्रेम विवाह गरेका थिए ।
आफुसंग प्रेममा रहेको थाहा पाएपछि श्रीमतीको आमाबुवाले छिटो विवाह लै’जाउ भनेर दवा’व दिने गरेको र आफुले विवाह गरेको बताएका छन् । विवाह भएको दुई महिनामै श्रीमती हरा’एपछि अहिले श्रीमानहरु मिडियामा घ’टना सार्वजनिक भएको हो । इताजा खबरबाट
प्रेमिकालाई फ’काउन यी युवाले बनाए ‘लभ आइल्याण्ड’, प्रेमिका त आइनन् तर पर्यटक आउन थाले
‘फूल राम्रो’ मा आकाश श्रेष्ठ र सम्झना खत्रीको रोमान्स (भिडियो सहित)
August 23, 2020 admin समाचार 27894
कलंकीमा डिउटीमा रहेका ट्राफि`कलाई बसले दियो ठ’क्कर
February 15, 2022 admin समाचार 1614
काठमाडौं । बसले ठ’क्क’र दिँ’दा कलंकीमा एक ट्राफि`क घाइते भएका छन् । आरएनएसीबाट मच्छेगाउँ जाँदै गरेको बा ४ ख १२३३ नम्बरको बसले डिउटीमै रहेका ट्राफि`क राजेन्द्र कुवर`लाई ठ’क्क’र दिएको हो । ठ’क्क’र’बाट घाइते ट्राफिकको ठाउकोमा
सञ्चारकर्मी नरेश भट्टराई रोमान्टिक हुँदै करुणासँग ( भिडियो सहित)
January 29, 2021 admin समाचार 7806
गायक कुमार दवाडीको स्व’रमा रहेको ‘नबोली जित्छौ तिमी’ बोलको गीतको भिडियो सा’र्वजनिक भएको छ । भिडियोमा सञ्चारकर्मी नरेश भट्टराई र करुणा श्रेष्ठ फि’चर्ड छन् । भिडियोले दरवार बाहिरकी रानीको क’था बोल्छ । गीतमा होम न्यौपा’नेको
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (241974)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (229877)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (229506)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (227881)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (226676)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (226253)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (194274)